Ny biraon'ny London TAT dia manohana tanteraka ny fisokafan'ny Phuket ho an'ny mpizahatany amin'ny volana Jolay
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Ny biraon'ny London TAT dia manohana tanteraka ny fisokafan'ny Phuket ho an'ny mpizahatany amin'ny volana Jolay
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny laharam-pahamehan'ny Thailand dia ny fiarovana ny fizahantany ho an'ny mpizahatany na ny eo an-toerana
Thailand dia manao dingana mitandrina sy dinika hanokafana ny fizahantany amin'ny tsena iraisam-pirenena
Manomboka amin'ny 1 Jolay, ny vanim-potoana quarantine dia hesorina tanteraka ho an'i Phuket
Manomboka amin'ny volana Oktobra, faritra fizahan-tany dimy hafa no hanamaivana ny fameperana
Ny vaovao tsara farany momba ny fisokafan'i Phuket dia noraisin'ny biraon'ny birao fizahan-tany any Londres.
Manomboka amin'ny 1 Jolay dia hesorina tanteraka ny quarantine ho an'i Phuket ary omena laharam-pahamehana ny mponina ao Phuket handray io vaksininy io.
"Ny laharam-pahamehan'ny Thailandy dia ny fametrahana ny fizahantany ho azo antoka na ho an'ny mpizahatany na ny ao an-toerana," hoy Rtoa Chiravadee Khunsub, Talen'ny Manampahefana misahana ny fizahan-tany any Thailand (TAT) Biraon'ny London.
“Vaovao tsara ity fanambarana ity satria i Thailand dia mitandrina sy mihevitra ny fomba hanokafana ny fizahantany amin'ny tsena iraisam-pirenena.”
Manomboka amin'ny 1 Jolay, i Phuket no ho tonga voalohany any Thailandy handray ireo mpitsangatsangana iraisam-pirenena voasedra feno nefa tsy mila quarantine.
Nitranga izany taorian'ny nankatoavan'ny Center for Economic Situation Situations (CESA), notarihin'ny praiminisitra Thai, Prayuth Chan-Ocha, ny fisokafan'ny firenena an-tsehatra.
Manomboka amin'ny volana Oktobra, faritra fizahan-tany dimy hafa no hanamaivana ny fameperana.
Ny mpandeha dia tsy maintsy tonga amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Phuket. Ny governoran'i Phuket dia mikendry ny hanaovana vaksiny ny 70% amin'ny mponina ao amin'ny nosy alohan'ny hanombohana ny fizahan-tany.